युगसम्बाद साप्ताहिक - शक्तिको राजनीति र नेताका कड्काई - महेश्वर शर्मा
Thursday, 02.20.2020, 09:53am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 01.01.2013, 07:01am (GMT+5.5)
एउटा राजमहलको भित्तामा छिपकिली टाँस्सिएको छ । उसले ‘म यहाँबाट हटें भने यो भित्तो भत्किहाल्छ नि, किनभने यसलाई मैले नै अड्याएको छु’ भन्ठानेछ । यहाँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीजीले पनि ‘मैले सरकार छोडें भने त सबै कुरा बिग्रन्छ, त्यसैले मैले छोड्नै हुँदैन’ भनिरहनुभएको छ । तर त्यो भित्तोमा उहाँ आउनुभन्दा अघि पनि धेरै छिपकिली थिए भनेर याद गर्नुभएको रहेनछ । जनताका माझमा गएर उनीहरूलाई सुख–दुःखमा साथ दिएर, रिझाएर राजनीति गर्नभन्दा त जायज नाजायज जुनसुकै तरिकाबाट भए पनि सत्ता कब्जाको राजनीति नै सजिलो हुँदोरहेछ । त्यसैले त यहाँ अधिकांश नेताले दोस्रो उपाय नै मनपराउने गरेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्रीको इलेक्ट्रिफाइड कुर्सीमा बसेपछि कसले छुने ? छुन खोज्नेलाई नै करेण्ट लाग्छ । त्यो सत्ता विद्युतको चमत्कार हो । त्यसैलाई शायद सत्ता राजनीति भन्दछन् नेताहरू । त्यसैले जनताको उपेक्षा गर्न यिनीहरूलाई किञ्चित पनि लाग्दैन ।
जनतालाई सर्वशक्ति सम्पन्न भनिदिएका छन् तर यहाँ उल्टो छ नेता मात्रै शक्ति सम्पन्न भएका छन् । जनताको करेण्टले नेतालाई ‘शक’ दिनुपर्नेमा यहाँ नेताको करेण्ट जनतालाई लाग्नेगरेको छ । जनता विवश छन् । कर्म गर्ने र दुःख पाउने जनता, फल उपभोग गर्ने नेता यस्तो उल्टो चालचलन यहाँ छ । जनतालाई ‘कर्मण्येवाऽधिकारस्ते’ भनिदियो, आफूले मोज गर्यो । राजनीतिको सार यहाँ यस्तै विकृत रुपमा देखापरेको छ । प्रचण्डजीलाई नै हेरौं न– उहाँ सम्पन्नताको चूलीमा हुनुहुन्छ । त्यो त्यही सत्ता शक्तिको ताप त हो । अस्तिमात्रै उहाँले मेलम्चीमा कड्केर भाषण गर्दा ‘मसंग ३३ हजार ५ सय तालिमप्राप्त लडाकु गाउँगाउँमा छन्’ भनेर कांग्रेस र एमालेलाई तर्साउन खोज्नुभयो । त्यति मात्र होइन, पेन्सन सरह एकैमुष्ठ ५–८ लाख बुझेर गएकाहरू पनि त उहाँसंग छन् नि । अझ अनमिनले अयोग्य भनेकालाई झण्डै ६० करोड दिन लाग्दा अदालतले रोकेर पो त, नत्र तिनीहरू पनि त छँदैछन् नि । केही वैद्यजीका भागमा जालान् त्यत्ति न हो । त्यसैले उहाँको शक्तिलाई कसले कमजोर भनेको छ र !
नेताहरू जब कड्केर भाषण गर्छन् त्योबेला उनीहरूभित्रको कमजोरी प्रकट भएको हुन्छ । हाम्रो कमजोरी नठानियोस्, यो भएन भने हामी त्यो गर्छौं, हामीले चाहेजस्तो संविधान बनाउन दिएनन् भने अथवा हाम्रा बिरुद्ध षड्यन्त्र गरियो भने हामी विद्रोह गर्छौं इत्यादि कड्काइ कमजोर मानसिकताकै उपज हुन्छन् । खुरुखुरु काम गरे त देखिइहाल्छ नि कड्कनै पर्दैन । यसो गर्नुका पछाडि अर्को पनि कारण छ । त्यो हो– जनतालाई अलमल्याउने र के के न गर्छन् कि भनेर भ्रममा पार्ने । आत्मविश्वास नहुनेले पनि कडा भाषण सुनाएर जनतालाई रल्याउन र कार्यकर्तालाई थामथुम पार्न खोज्छन् । यो अरुलाई धोका दिने काम हो । फेरि यस्तै धोकेवाजहरूको राजनीति चम्केको पाइन्छ, यो नै विडम्बना हो । त्यस्ताहरू मनको कलुष लुकाउनका लागि पनि कुरा एउटा र काम अर्को गर्छन् । मात्रा घटी बढी भए पनि सबै पार्टीका अधिकांश नेताको व्यवहार यस्तै देखिन्छ ।
बुझ्नेहरूलाई थाहै छ– यहाँ एकपटक राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र अरु पनि के के मन्त्री एकैपटक हुन पाए पनि जीवनभर विशेष सुविधाका नाममा मोटर, गार्ड, तलबभत्ता, पिए स्टाफ, पेट्रोल, मर्मत खर्च आदि अनेक सुविधा पाउने कानुन बनाएका छन् । त्यसैका लागि पनि मन्त्री हुन झुत्ति खेल्छन् । यहाँ सरकारमा पुग्न पाएपछि आफ्नो हात जगन्नाथ गर्न पाइँदोरहेछ । हुँदाहुँदा चाँडचाँडै सरकार फेरिंदा त त्यस्तो विशेष सुविधा पाउनेहरूको भीडले सरकारी ढुकुटी त त्यसै रित्याउने भए । मुखले देश, जनता र प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने, तर व्यवहारमा आफ्नै बन्दोबस्त गर्ने परिपाटी बसालेका छन् । जनताकै सेवक हुन् भने जनतासिकै डराएर किन अंगरक्षक चाहिएको हो ? यसको अर्थ हो सरकारमा बसेर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर जनतालाई चिढ्याएका हुनाले सरकारबाट हटेपछि पनि यिनीहरूलाई अंगरक्षक चाहियो । बुझ्नेका लागि यो त लाजमर्दो स्थिति हो ।
दलहरूको उँभौली र उँध्यौली सत्ता शक्तिमा भरपर्ने परम्परा बसेकाले यतिबेला सत्ता बाहिर परेका कांग्रेस र एमो उँध्यौलीमा छन् । तैबिसेक एमाओवादी उँभौलीमा देखिए पनि सत्ताकै कारण हो तापनि वैद्य पक्ष अलग भएको स्थितिमा सत्ता छुट्नासाथ एमाओवादी खतरामा पर्नेछ । त्यसैले त एमाओवादी सत्तामा टाँस्सिइरहन अनेक तिकडम गरिरहेको छ । जनसम्पर्कभन्दा सत्ताको हैकमबाट पार्टी चलाउने प्रवृत्तिले गर्दा यहाँ दलहरूले पहिलेको जनाधार गुमाइसकेको स्थिति छ । निकट भविष्यमा निर्वाचन भैहाल्यो भने पनि आफ्नो शान मान गुमाइसकेका यी कुनै पनि दल जनतामा जाँदा के लिएर के भन्न जान्छन् खै ? आखिर एक अर्कालाई दोष दिएर आफू मात्रै चोखो देखिन खोज्नु बाहेक यिनीहरू कसंसंग पनि केही छैन । तैपनि जनता यिनैलाई चुन्न बाध्य हुनेछन् । यो बडो नमीठो विडम्बना हुनेछ ।
नेताको ‘सहमति–सहमति’ सुन्दा सुन्दै जनताका कान टटइसकेका छन् । लेख्नेहरूले पनि धेरै कागज मसी खर्च गरिसकेका छन् । तैपनि उपलब्धि केही छैन । अब पनि राष्ट्रपतिबाट अरु म्याद थपाउनु, फेरि पनि छलफलै गराइरहे र समय खेर फाल्नुको औचित्य देखिंदैन । गर्नुपर्ने तयारी भाषणमा मात्रै सीमित हुनाले वैशाखमा निर्वाचन असम्भव भैसकेको छ । सबैतर्फबाट देश अधोगतिमा जाँदैछ । यस्तो स्थितिमा पनि कानुनका कुरा गरेर मात्रै साध्य छैन । कुन काम यहाँ कानुन अनुसार भएको छ ? सरकार नै गैरकानुनी छ । संसद् छैन, संविधान छैन । के यस्तै हुन्छ कानुनी शासन ?
एकथरि संविधानसभा पुनःस्थापनामा अडिने र अर्काथरि वर्तमान सरकारको वहिर्गमन नभै कुनै पनि शर्त नमान्ने गर्दागर्दै एक अर्काको खण्डन मण्डनको दोहोरी कहिल्यै नटुंगिने र यता समस्याका गाँठा झनै कस्सिदै जाने स्थितिबाट नेताहरू त जनताका नजरमा गिर्छन् नै देशै पतनको खाल्टोमा जाने पीरले पो आत्तिनुपर्ने भयो । नेताहरूको यो व्यामोह कहिल्यै हट्ने हो कि होयन कुन्नि ? अब त अति भैसक्यो ।
यो असाधारण अवस्था हो । यस्तोमा देश र जनताको हित हेर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले हो । आवश्यकताले गर्दा असाधारण कदम चाल्ने हिम्मत पनि गर्न सक्नुपर्दछ । सरकार अहिले त्यसै पनि काम चलाउ छ । अरु वैधानिक बाटा बन्दछन् भने यो सरकारलाई भंग गरेर एक प्रकारको राष्ट्रपति शासन लागू गर्ने र निर्वाचनको घोषणा गर्ने बाटोमा लाग्नुपर्ने हो । त्यस निम्ति सकेसम्म निरपेक्ष छोटो छरितो चुनावी सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । दलहरूको तानातानी हेर्दा गैरदलीय सरकार बेगर निर्वाचनमा निष्पक्षताको आशा गर्ने अवस्था रहेको छैन । राजनीतिक स्थिति झनै विग्रदै गएको अवस्था हुनाले संविधान एवं संसद्को शून्यतामा कानुनका राग अलापेर बस्तु व्यर्थ छ ।
आस्थाका शिखर पुरूष स्व. वासुदेव शर्मासंग सहकार्यको तीन वर्ष : तारा सुवेदी (01.01.2013)
सत्ताको सौदावाजीमा रूल्मुलिएको विकासको नारा - यादब देवकोटा (12.24.2012)
राष्ट्रपतिलाई झुम्राको पुतली नबनाउ - महेश्वर शर्मा (12.24.2012)
जिम्मेदार को ? - तारा सुवेदी (12.24.2012)
परिवर्तनका संवाहक भनिएका नेताहरू असफल भएकै हुन् ? - यादब देवकोटा (12.17.2012)